बेलायती महारानीका रोचक तथ्य – " कञ्चनजंगा News "
No Comments on बेलायती महारानीका रोचक तथ्य
हो, बेलायतकी महारानी एलिजाबेथ द्वितीया सायद विश्वकै एकमात्र यस्ती महिला हुन् जो विना भिसा तथा पासपोर्ट दुनियाका १ सयभन्दा धेरै देश घुमिसकेकी छिन् ।
वास्तवमा बेलायतमा महारानीको राहदानी नै हुँदैन । महारानी बाहेक बेलायती राजपरिवारका अन्य सदस्यको भने राहदानी हुन्छ र उनीहरु राहदानी लिएर विदेश जान्छन् ।
ड्राइभिङ लाइसेन्स पनि छैन, आय कर पनि तिर्नुपर्दैन !
महारानीसँग सवारी चालक अनुमतिपत्र पनि छैन । तरपनि उनी कार चलाउँछिन् ।
बेलायतमा महारानीमात्र एकजना यस्ती नागरिक हुन् जसले आयकर तिर्नु पर्दैन । तर सन् १९९२ देखि उनले स्वेच्छाले आफ्नो आम्दानीको नियमानुसारको कर सरकारी ढुकुटीमा जम्मा गर्दै आएकी छिन् ।
जन्मदिन मनाउने मिति फरक-फरक
अर्को रोचक कुरा के भने महारानीको जन्मदिन समेत फरक-फरक मितिमा मनाइन्छ । उनको आधिकारिक जन्मदिन बेलायत, अस्ट्रेलिया, क्यानडा तथा न्यूजिल्याण्डमा फरक-फरक मितिमा मनाइन्छ । बेलायतमा हरेक वर्ष जून महिनाको पहिलो, दोस्रो वा तेस्रो शनिबार महारानीको जन्मदिन मनाइन्छ, सरकारी तवरमा ।
त्यस्तै न्युजिल्याण्डमा जूनको पहिलो सोमबार तथा क्यानडामा मे महिनाको पहिलो सोमबार महारानी एलिजावेथको जन्मदिन मनाइन्छ । तर महारानीको वास्तविक जन्मदिन चाहिँ अपि्रल २१ तारेख हो । उक्त दिन उनले राजदरबारमा परिवारका साथमा आफ्नो जन्मदिन मनाउँछिन् ।
← बेलायतमा बिहीबार आम निर्वाचन सुरु,शुक्रबार परिणाम आउने → पूर्व अर्थमन्त्री डा. महतको किताब ‘ट्रेल्स, ट्रेमोर्स एण्ड होप’ सार्वजनिक